Sida loo tirtiro Dareemo adag (si joogto ah u tirtirta wax kasta)
Windows Maareynta Kaararka
Sida loo tirtiro Dareewal adag
Ka tirtir taxadar kombiyuutar adag adoo raacaya talaabooyinkan
Si aad u tirtirto darawalad adag waxaa loola jeedaa in si buuxda loo tirtiro baabuurka dhamaan macluumaadka. Tirtiridda wax walba ma tirtirayaan qalab adag iyo qaabayntu [had iyo jeer] ma tirtirto wadad adag. Waxaad u baahan doontaa inaad qaaddo tallaabo dheeraad ah si aad u tirtirto wadada adag ee gebi ahaanba.
Marka aad qaabeynayso darawalad adag ama aad tirtirto qayb ka mid ah , waxaad badanaa ka tirtireysaa nidaamka faylka , samaynta xogta aan la arki karin, ama aan mar dambe la dhicin, laakiin aan la tegin. Barnaamijka soo kabashada file ama qalab gaar ah ayaa si fudud u soocelin kara macluumaadka.
Haddii aad rabto in aad hubiso in macluumaadkaaga gaarka loo leeyahay ay sii socdeen weligaa, waxaad u baahan doontaa inaad tirtirto adigoo adeegsanaya software gaar ah.
Muhiim: Fiiri Talada # 2 ee hoose ee bogga si aad u hesho macluumaad ku saabsan "fudud" fudud oo la isticmaalayo qaabka qaabka ee Windows 10 , Windows 8 , Windows 7 , iyo Windows Vista .
Raac tallaabooyinka fudud ee hoose si aad si dhammaystiran u tirtirto darawal adag:
Sidee loo tirtiraa Kombiyuutarka Qalabka adag
Waqtiga Loo Baahan Yahay: Tani waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqadood dhowr saacadood iyadoo ku xiran hadba inta uu gaariga wadanku yahay iyo nooca software / habka aad doorato inaad tirtirto.
Dib u soo celi wixii aad rabto inaad hayso. Marka ay tirtirto qalabka jajaban ee adag, waxaa jiri doona gabi ahaanba ma jirto si aad wax uga hesho dib u celinta.
Talo: Haddii aad mar hore adeegsanaysay adeegga gurmadka online , waxaad si ammaan ah u qaadan kartaa in dhammaan faylashaada muhiimka ah ay horeyba ujiraan internetka.
Muhiim: Mararka qaar wadooyinka waawayni waxay ku jiraan hal gawaarid adag. Waxaad arki kartaa xawaaraha (qiyaasaha) kuwaas oo ku fadhiisanaya darawal adag oo ka yimid qalabka Maareynta Disk ee Windows.
Soo qaado barnaamijka burburinta xogta oo bilaash ah . Mid kasta oo ka mid ah barnaamijka ugu horreeya ee aan ku talineyno waxaan ku talineynaa liiskaas inay si weyn u shaqeynayaan sababtoo ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu tirtiro wadada adag ee ka baxsan dibadda Windows, munaasabadda lagama maarmaanka ah haddii aad rabto inaad tirtirto qalabka adag ee Windows lagu rakibay.
Talo: Waxaan ahay taageere weyn ee DBAN , markii ugu horeysay ee aan soo galno liiskaas. Waxaa suurtagal ah in qalabka tirtiridda wadnaha ee ugu badan loo isticmaalo. Eeg sida aan u tirtiro Dareeraha Hard DBAN wax ka qabashada haddii aad ka walwalsan tahay qaylo-dhaf adag ama doorbidayso tartan aad u faahfaahsan (haa, shaashadaha).
Fiiro gaar ah: Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo si buuxda loo tirtiro darawal adag laakiin isticmaalka software-ka burburka xogta waa midka ugu fudud oo weli u oggolaanaya in wadada adag ay mar labaad la isticmaalo.
Next, dhammeystir tallaabooyinka kasta ee lagama maarmaanka u ah in lagu rakibo barnaamijka ama, marka la eego barnaamijka loo yaqaan ' bootable ' sida DBAN, waxaad ka heleysaa image ISO CD ama DVD, ama qalab USB ah sida flash drive :
Haddii aad isticmaasho CD ama DVD , taasi badanaa waxay ku lug leedahay gubida sawirada ISO si ay u noqoto disk iyo ka dibna ka foojignaadaan disuga si uu u ordo barnaamijka.
Haddii aad isticmaalayso flash drive ama USB-ga kale , tani badanaaba waxay ku lug leedahay sawirka ISO si ay u isticmaasho qalabka USB ka dibna ka foojignaato kaabada USB-ga si aad u bilowdo.
Ku tirtir driveka adag sida ku cad tilmaamaha barnaamijka.
Fiiro gaar ah: Inta badan barnaamijyada burburinta xogta waxay isticmaalaan dhowr habab oo kala duwan si loo tirtiro wadid adag. Haddii aad ka war hayso wax ku oolnimada ama hababka loo isticmaalo si loo dhamaystiro tirtirka wadnaha oo adag, fiiri Hababka Nadiifinta Macluumaadka .
Ka dib markii si sax ah loo tirtiro wadada adag, waxaad ku kalsoonaan kartaa in wixii macluumaad ah ee ku saabsan baabuurtu ay hadda u wanaagsan yihiin.
Hadda waxaad ku rakibi kartaa Windows -ga baabuurta, sameynta qayb cusub , iibiso ama bixiso darawalnimada adag ama kombiyuutarka, dib-u-warshadeyn ama iska tuur , dib u soo celi faylashaada, ama wixii kale ee aad u baahan tahay inaad sameyso.
Talooyin & amp; Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan Dhibaatooyinka Dhibaatada ah
Inaad iska xawaaridid ​​qalab adag waa nidaam hawlgal oo madaxbannaan, illaa inta aad isticmaashid mid ka mid ah qalabyada bootable ee liiskayaga. Taas macnaheedu waa inaad isticmaali kartaa nidaamkan guud ee guud si aad u tirtirto qalab adag haddii aad haysato Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP , Linux, ama nidaam kasta oo ka mid ah nidaamka kombiyuutarka.
Laga bilaabo Windows Vista, qaabka qaabka isbeddelay iyo hal shaag oo loo yaqaan "zero pass" ayaa loo adeegsadaa qaab kasta (aan ahayn mid degdeg ah). Si kale haddii loo dhigo, tirtirid adag oo adag ayaa la sameeyaa inta lagu jiro qaabka.
Haddii hal shati oo ah "pass mail" oo ku filan kugu filan, tixgelinayso inaad baabuur wadato ka dib qaabab caadi ah Windows 10, dib ugu soo noqoshada Windows Vista. Haddii aad rabto wax aad uga ammaan badan, sii soco oo raac tilmaamaha sarifka adag ee kor ku xusan.
Maskaxda ku hay, sidoo kale, in tani ay tahay tirtirka kaliya ee qaybta aad ku shaqeysid. Haddii aad haysato wax ka badan hal qayb oo ah jajab adag, waxaad u baahan doontaa inaad qaabeyso dariiqooyinka dheeraadka ah ee aad u baahan tahay iyo haddii aad rabto inaad tixgeliso diskka oo dhan sida "loo tirtiro".
Haddii aad runtii rabto inaad sameyso waa inaad hubisaa in feylasha aad tirtirto dhab ahaantii kaa baxeen, qalabka tirtiridda xogta ayaa ka badan inta aad u baahan tahay. Fiiri liistada Barnaamijka Free Software Shredder Software barnaamijyada "burburin" faylasha shakhsiyadeed ee ku saleysan baahida.
Qaar badan oo ka mid ah barnaamijyada "shredder" waxa kale oo ay sameeyaan waxa loogu yeedho meel bannaan oo bilaash ah , taas oo ah tirtirid dhamaanba goobaha bilaashka ah ee kuugu adag, kaas oo, dabcan, ku daraya mid ka mid ah faylashaadii hore ee tirtirtay.
Weli miyuu jahwareerayaa Fiiri Wipe vs Shred vs Delete vs Erase: Waa maxay Farqiga? wax badan oo ku saabsan arrintan.
Sida Loo Helo Tilmaamaha Qaybta Dareemaha ama Nambarka Seri
Sida loo tirtiro Partition Recovery Windows
Sababta Sababta Xayeysiiska Loo Xayasi Karo Ma Aqoonsan Kartid Xogta Warbixinta Real
Sidee loo qaabeeyaa "Recovery Console"
Sida Loo Dhigo Dhibaato adag
Waa maxay SATA-ga dibedda (eSATA)?
Sida loo furo maaraynta qashinka laga bilaabo Sugitaanka Amarka
Maxay tahay SSHD (Dhibaatada Gawaarida Gaarka ah)?
Miyuu Suuragal Ah Inaad Daawatid 3D la'aan Indhacad?
IRip, iPod-ga Barnaamijka Kumbiyuutarka Kumbuyuutarka, Baadhitaan
Waa maxay Diiwaanka Master Bootka (MBR)?
Sida loo soo diro farriin u dir koox koox ah
Waa maxay anteeniyaha raadiye ee rakiban?
Hore New Android? Waa kuwan waxa la samaynayo Qalabkaagii hore
Sidee looga gudbi karaa eBay
Waa maxay Isku-xirka Kumbuyuutarka?
Talooyinka Amniga ee Moobaylka
Dhexdhexaadin ilaa Mashruucyo Arduino ah
Barnaamijka Ku-soo-Dhawaaqa ah ee Digital-to-Analog Converter Box
Talooyin loogu talagalay bloggers
Waa maxay Voltage? (Qeexitaanka)
Erayada Macluumaadka ee loogu talagalay iPad-kaaga
Mafia Wars Cheats, Talooyin, Talooyin iyo Istaraatijiyado
Isticmaal Calendar Calendar. Ururka Internetku marna ma fududa
Sida Loo Dhigayo Musikada iPod-ga Macadkaaga
Maxay tahay Xaanshida XLSB?